Ukubuyekezwa kweNhloko Yomhlaba Wonke - I-EA Forex Ehamba phambili | Abacebisi Abachwepheshe | Ama-Robots ama-FX
IkhayaAma-Brokers aphezulu we-forexUkubuyekezwa kwe-Global Prime
Igama Lenkampani: I-Global Prime Pty Ltd (iNdunankulu Yomhlaba Wonke)
Ukubuyekezwa Komhlaba Okuphezulu - Okuhamba phambili kweBroker eyi-Forex Ngokusekelwa Kweekhasimende Okuhlukile
Isekelwe ku-2010 futhi ilawulwa yi-Gleneagle Securities, Prime Prime ungomunye wokuhola Abathengi be-Forex ne-CFD ase-Australia asekelwe e-Australia ukuhlinzeka ngezixazululo zokuhweba kwabathengisi bezinsuku ezisebenzayo nabaqashi kanye nabathengisi abasha emakethe ye-Forex noma abasebenzisa abacebisi be-FX Expert. I-brokerage inikeza abathengi bayo i-Metatrader 4 (MT4) ukuhweba phakathi kwezimali ze-42 nezitini ngokusebenzisa abahlinzeki be-1 abakweletayo.
I-Global Prime Pty Ltd (INdunankulu yamazwe omhlaba wonke) yahlanganiswa eSydney, e-Australia ku-2010 yiqembu labachwepheshe embonini yezinsizakalo zezezimali eyasiza ekuphumeleleni kwesinye sezikhulu ze-CFD e-Australia kanye nabahlinzeki be-Forex. Global Prime's mission ukudala indawo engcono kakhulu futhi ebonakalayo yokuhweba imaklayenti yokuthengisa kanye nezikhungo ngokufanayo evumela abadayisi ukugxila kabanzi ekuhwebeni yabo.
I-Global Prime - Amaphuzu amakhulu
I-ASIC ilawula umthengisi wase-Australia neqembu elikhulu abazinikele ngempela ekunakekeleni amaklayenti abo.
Ukuqedela okuphelele. Kusobala ukuthi akukho b-ncwadi noma ukukhishwa kwemakethe ngehlobo olulodwa lwe-akhawunti olunikezwa: I-ECN / DMA KUPHELA.
Umthengisi kuphela ozimisele ukufakazela ukuthi wonke amathenda athunyelwa kuma-Providers Liquidity. Prime Prime can supply a trade receipt on any trade taken which shows which Liquidity Provider filled the trade thus proving all trades are sent to LP's.
Kusakazeka kakhulu. Linganisa kuze kufike ku-1: 200 (ukuphakama okuphezulu okulindile) ngezinga le-zero stop.
Usayizi Oncane Wohwebo Olukhulu - 0.01 Lots.
Trade Izimali ze-42 nezinsimbi ngokusebenzisa abanikezeli be-1 liquidity providers.
Amaseva ku I-Equinix NY4 ukuhlinzeka uxhumano lwe-1 msaka uma lisetshenziselwa i-Beeks FX VPS.
Ama-Beeks wamahhala e-FX VPS ukuthengiswa kwamaklayenti amakhulu kunezinkampani ze-20 ngenyanga, ngaphandle kwalokho kuhlaziye kakhulu ama-VPS amanani.
Ikhomishini ye-$ 7 (i-AUD efanayo) nge-100k round turn
I-Deposit encane ye-$ 200 nge-AUD, USD, GBP, EUR ama-akhawunti ahleliwe.
Inqubo yokubhalisa ngokushesha futhi ephumelelayo.
Yakhiwe abadayisi abadayisi Prime Prime izinikele ekunikezeni ukusabalalisa okuphakeme, ukukhishwa kanye nensizakalo!
Global Prime - Umthethonqubo
Prime Prime igunyaziwe futhi lilawulwa yi IKhomishane yezokuThengiswa kwezokuThengisa yase-Australia (ASIC). Ukuhweba ngokuthula kwengqondo ukwazi Prime Prime ihlolwe ngenye yezinhlangano ezilawulwa ngokwezimali ezisezingeni eliphezulu emhlabeni jikelele.
Prime Prime unendawo yomcwaningi ozimele wangaphandle ukuqinisekisa ukuhambisana nezibopho zokulawula nezinqubo zokusebenza.
Ngokuhambisana ne-Australian Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financial Act 2006 Prime Prime inezinqubomgomo nezinqubo zokuqinisekisa ukuhambisana nomthetho. Lezi zinqubomgomo nezinqubo zenzelwe ukuvimbela imisebenzi yokwehliswa kwemali kusuka okwenzekayo. Inqubomgomo ye-Anti-Money Laundering ichaza amadokhumenti okumele usinikeze ngaphambi kokuvula i-akhawunti.
I-Global Prime Pty Ltd uphethe i Ilayisensi yesevisi yasezimali yase-Australia (AFSL no. 385620) futhi ugunyaziwe ukuqhuba ibhizinisi lezinsizakalo zezezimali e-Australia, okukhawulelwe ezinsizakalweni zezezimali ezihlanganiswe yi-AFSL.
Prime Prime unikeza amaklayenti ithuba lokuhweba ngomklomelo I-platform ye-Metatrader 4 (MT4). Akungabazeki ukuthi indawo yokuhweba ethandwa kakhulu emhlabeni yabathengisi be-forex. Ngoba kulula ukuyisebenzisa, enezindawo ezicebile futhi ikhono lokuhweba elizenzakalelayo.
Imiyalo yemakethe, imiyalo esalindile, ukuhweba kusuka eshadini, imiyalo yokuyeka, ukuyeka ukulandelana, amashadi wamakethi kanye nomlando wokuhweba wonke amathuluzi onawo. Nge-Metatrader 4, ukuhweba kuyavumelana nezimo futhi kulula.
Izindlela zokusebenzisa ze-3
Imiyalo ye-2 yemakethe
I-4 imiyalo elindile
Imiyalo yokumisa i-2 nesitoreji esilandelayo
Izinto ze-23 zokuhlaziya
Izinkomba zobuchwepheshe ze-30
Cishe noma yiliphi iqhinga lokuhweba lingasungulwa futhi lisetshenziswe njenge Expert Advisor, ukuze ngokuzenzakalelayo usebenze wonke umsebenzi kuwe. I-robot ye-Forex yokuhweba ingakwazi ukulawula kokubili ukuhweba nokuhlaziya okukukhulula ekuhlaziyweni kwemakethe njalo. I-MT4 inikeza indawo ephelele yokuthuthukiswa, ukuhlolwa nokuthuthukisa izinhlelo zokuhweba ezilungiswayo.
Ungasebenzisa uhlelo lwakho lokusebenza ekuhwebeni, ulifake kulabhulali yekhodi yamahhala noma uthengise eMakethe.
Ulimi lwe-MQL4 lwamasu okuhweba
I-Library yama-robot yamahhala wokuhweba mahhala
I-akhawunti ye-Global Prime ECN iyatholakala kwi-platform ye-Metatrader 4 yokuhweba ye-Windows ne-Mac.
Ngaphezu kwalokho, Prime Prime inikeza i-Metatrader 4 njengohlelo lwe-Android, i-iPhone ne-iPad. Lezi zinhlelo zinika abadayisi ukufinyelela okulula kuma-akhawunti abo nomaphi lapho bekhona.
Global Prime's Ukhetho lwemikhiqizo ekhethiwe ngokucophelela lunikeza ukufinyelela ezimakethe ezithandwayo nakakhulu zomhlaba wonke emhlabeni ngamathuba amahle kakhulu okuhweba 24 / 7.
The imakethe yezokuhwebelana kwamanye amazwe (Forex, FX, noma imakethe yemali) kuyinto yomhlaba jikelele, ehloniphekile, emakethe ye-counter-the-counter yokuhweba kwezimali. Ngokusho kwesitatimende esikhishwe yi-CLS, isisombululo esikhulu sokuhweba, ivolumu edayiswa nsuku zonke ngoFebhuwari 2018 ithola $ 1.855 trillion!
Imakethe ye-Forex inikeza abahwebi ithuba lokudayisa amahora angu-24 ngosuku, izinsuku ezingu-5 ngesonto emakethe yezimali eningi kakhulu emhlabeni. Abathengisi bangasebenzisa ngokunakekelwa ukusabalala okuqine kakhulu, ukukhishwa okuphakeme, kuze kufike I-1: 200 ukuphakamisa, ne-deep interbank liquidity yonkana Izinkampani zezimali ze-50.
CFD's (Contracts for Difference) are derivatives that allow you to trade an underlying asset, without having to purchase that asset. A CFD is an agreement to exchange the difference in the value of an asset from the time the contract is opened until the time at which it’s closed. You can trade CFDs, long or short, to speculate on price movement or you can utilise CFD's to hedge an existing portfolio. Prime Prime inikeza amaklayenti ikhono lokudayisa i-Index kanye ne-Commodity CFD nge-MT4 ne-FIX API.
Hamba isikhathi eside noma esifushane kuwo wonke ububanzi obukhulu kunabo bonke emhlabeni Ama-cryptocurrencies. Ukuhweba ngokumelene nabanye abathengisi abathengisa 24 / 5 lapho ukunyakaza kwentengo kuqhutshwa ngokuyinhloko ngokwesaba nokuhaha, izindaba kanye nemizwa ekhona. Jabulela ukuhweba ngaphandle kokusetshenziswa, akukho ikhomishana, ikhono lokubamba, ukusabalalisa ukuncintisana nokuqeda Cryptocurrency Ukushintsha ingozi ngokuhweba nomdayisi olawulwa yi-ASIC.
Ukuvula a I-akhawunti ye-Global Prime ECN kulula. Umthengisi unikezela ONE akhawunti kubo bonke. Nazi izici:
Thola - 1: 100. I-1: i-200 (itholakale ikhona)
Commission - $ 7 nge-100k nxazonke
Ama-deposit aphansi - I-XUDUM 200 (noma ilingana)
Ucingo lweMargin - @ 120%
I-Stop Stop - @ 100%
Ubuncane Bokuhweba Okuncane - 0.01 eziningi
Ulungele ukuvula i-akhawunti? Sicela imibhalo yokukhomba ukulungele:
Ubufakazi bokuthi ungubani (Ilayisensi Yomshayeli noma Iphasiwedi)
Ubufakazi bekheli (Isitatimende somsebenzi noma isitatimende seBhange)
I-akhawunti ye-Global Prime ECN ayikho imikhawulo yokuhweba!
Prime Prime unikeza ezinye ze izimo zokuhweba ezingcono kakhulu ze-scalping futhi imvamisa high zokuhweba futhi Forex Expert Advisor ukuhweba emhlabeni jikelele. Abathengisi bangakwazi futhi ukubeka izikhundla njengoba kungekho okuqala ekulawuleni kokuqala (FIFO) Prime Prime. Futhi abathengisi abakhokheli umkhawulo emakethe ahlanganisiwe futhi ujabulele izinzuzo zokungena kwe-margin.
The Umhlaba jikelele we-Global Prime ECN unikeza izimboni ezimbi kakhulu nezimo zokuhweba eziguquguqukayo emhlabeni wonke. Zilungele abahwebi abafuna ikhwalithi yokukhishwa engcono kakhulu nokusabalala okuphansi.
Prime Prime Izintengo zokusakaza zivuliwe I-42 ehlukene yezinhlamvu zemali nezensimbi ku-platform ye-MT4 yokuhweba. Prime Prime uyakwazi ukunikeza ezinye zezindleko ezinhle embonini ngokuhlanganisa izingcaphuno ezivela kumabhange ahlukene kanye nemithombo yamanzi ye-liquid pool. Le ntengo ephansi ehlangene nokuvinjelwa kokukhipha okungavumelekile kwenza Prime Prime indawo eyamukelekayo yabathengisi bamalanga, abaqaphi kanye nalabo abasebenzisa Abacebisi Bezazi ze-FX (ama-Forex EA's).
Ngokunikela buyisela ku-1: 200 lo broker uvula indlela eya emakethe ye-forex yabathengisi beZitolo. Ukusebenzisa isisindo kusho ukusho okuncane kokuqala (margin) kuyadingeka. Ukusetshenziswa kwesilinganiso kungakhuphula ukuzuza kodwa ukulahlekelwa nakho kungadlula idiphozi yakho yokuqala. Izinga elijwayelekile elihlinzekwa yi-1: 100 (1% imfuneko yomama). Ukuphakama okuphezulu kunikezwe yi-1: 200 (0.5% imfuneko yomama). Ukusetshenziswa kwe-XAUUSD (i-Gold) yi-1: 100 (i-1% imfuneko yomugqa) kungakhathaliseki ukuthi i-akhawunti isetshenziswe kanjani.
I-Prime Prime iyasakazeka yizimakethe eziholayo ngamanani asakaza kusuka emazweni ahlukene kanye namachibi amnyama okuthengwa kwemithombo. Amaseva we-latency aphansi emkhakheni webhizinisi we-ECN ukuhweba imvelo kusho ukuthi uzohlala uhweba ngentengo engcono kakhulu. Ukusakazeka kungahamba njengama-pips we-0.0 ku-platform ye-Metatrader 4 (MT4).
On I-akhawunti ye-Global Prime ECN, kukhona ikhomishana ye-$ 7 nge-standard round round turn and ukusakazeka kuyashintsha futhi uqale kusuka kuma-pips we-0.0.
I-Global Prime - Siyakwamukela ku-Top Tier Forex Ukuhweba
Prime Prime ungumthengisi we-forex ozinikele ekuhlinzekeni indawo yokuhweba ephezulu, nezinga eliphakeme kakhulu lokwabala nokusekelwa okungalingani!
Prime Prime unikeza ngaphezulu Izinketho zezimali ze-6 eziguquguqukayo in I-6 zezimali eziyisisekelo ezihlukene. Idiphozi ngokushesha futhi mahhala besebenzisa izindlela eziningi.
I-Wire Wire, i-POLi, BPAY, Ikhadi lesikweletu / debit, i-Neteller
Nini ngezimali imali yakho yokuthengisa i-akhawunti yomthengi igcinwe kuyo Ama-akhawunti we-Client Trust ahlukanisiwe eWestpac Banking Corporation (Westpac), i-AA ilinganise i-Australian Bank. Ukukhokha kwe-elekthronikhi kusetshenziselwa ubuchwepheshe be-SSL (i-Secure Socket Layer) futhi bubethelwe ukuze kuqinisekiswe ukuphepha. Yonke imininingwane yokukhokha iyimfihlo futhi isetshenziselwa kuphela ukuxhasa nge-akhawunti yakho yokuhweba Prime Prime.
Ukuze ugweme noma yikuphi ukubambezeleka, sicela uqinisekise ukuthi ufake inombolo yakho yereferensi njengoba lokhu kusiza ukufanisa izimali zakho. Ukuze uthole inombolo yakho yereferensi sicela ubheke i-imeyili yakho yokuqala yokufundisa ngemali noma ungene ngemvume I-Client Portal> Isikhwama nge wire bank.
Prime Prime ayikhokhisi imali eyengeziwe yokufaka imali. Kodwa kufanele uqaphele ukuthi ungathola izimali ezikhokhayo nakwezinye izikhungo zebhange zomhlaba jikelele. Prime Prime ayitholi mthwalo wemfanelo nganoma yiziphi izimali zebhange.
Ukucubungula ngokushesha bonke abanikazi be-akhawunti manje kudingeka bahambise izicelo zokuhoxiswa ukusuka I-Portent Portal.
Isicelo sokuhoxiswa sithunyelwe ngaphambi kwe-11: 00 AEDT (00: 00 GMT) izocutshungulwa ngosuku olufanayo. Noma yisiphi isicelo emva kwalokho sizocutshungulwa ngosuku olulandelayo lebhizinisi.
Prime Prime ayikhokhisi imali eyengeziwe yokuhoxiswa. Kodwa kufanele uqaphele ukuthi ungathola izimali ezikhokhayo nakwezinye izikhungo zebhange zomhlaba jikelele.
Ukuhoxiswa kweBhange - Lokhu kungabuyiselwa ku-akhawunti yasebhange ngegama elifanayo ne-akhawunti yakho yokuhweba yePremi Prime
Ukukhishwa kwekhadi lesikweletu - Kuphela inani lediphozi lokuqala lingabuyiselwa ekhadini lesikweletu. Amanani ngaphezulu kwalokhu kumele abuyiselwe ngocingo lwebhange.
Iphakheji le-Vron ye-Bron ye-Global Prime amaklayenti:
Ukuhweba ngaphezu kwengubo ye-20 ngenyanga futhi uthole iphakheji ye-Bronze VPS yokunikezwayo ye-Bronze VPS isipho £ 18 (~ $ $ 23USD) ngenyanga. Ngokuvamile £ 27 Ngenyanga. (Usuku lokuphela lokuphromotha: May 31, 2019 12: 00: 00 AM)
I-Global Prime Pty Ltd ine amaklayenti kuwo wonke umhlaba futhi inikeza ukwesekwa kwamakhasimende okuhlukile futhi okunokwethenjelwa 24 / 5 ngokusebenzisa ingxoxo bukhoma, usizo lwe-intanethi, isigaba esibanzi se-FAQ, i-hotline yocingo ne-imeyili.
Prime Prime ungomunye wabathengi be-Forex abahola phambili be-Australia Abathengisi Bombhalo Ophakeme, Abaqashi futhi Isazi Advisors. Le nkampani inikeza indawo ekhethekile yokuhweba ye-ECN, izici zezobuchwepheshe obuphezulu kanye nezimo zokuhweba ezinhle kakhulu. Umthengisi unikeza ukukhethwa okukhulu kwezinto zokuthengisa, kufaka phakathi i-cryptocurrencies, kanye nensizakalo yokusekela amakhasimende eqinile.
Vakashela iwebhusayithi ye-Prime Prime esemthethweni
Ubani i-Global Prime Forex?
Isekelwe ku-2010 futhi ilawulwa yi-Gleneagle Securities, Prime Prime ungomunye wokuhola Abathengi be-Forex ne-CFD ase-Australia asekelwe e-Australia ukuhlinzeka ngezixazululo zokuhweba kwabathengisi bezinsuku ezisebenzayo nabaqashi kanye nabathengisi abasha emakethe ye-Forex noma abasebenzisa abacebisi be-FX Expert. I-brokerage inikeza abathengi bayo i-Metatrader 4 (MT4) ukuhweba phakathi kwezimali ze-42 nezitini ngokusebenzisa abahlinzeki be-1 abakweletayo. Umthengisi uzinikezele ukuletha abatshalizimali nabathengisi base-Australia nakwamanye amazwe izixazululo ngaphambilini ezitholakala kuphela kubaqeqeshiwe namabhange amakhulu okutshala izimali emhlabeni wonke.
Ingabe iNdunankulu Yomhlaba Wonke ilawulwa?
Prime Prime ilawulwa yi-ASIC e-Australia futhi iphethe ilayisensi yezinsizakalo zezezimali 385620. Prime Prime kuvumelana nezidingo zezimali ze-ASIC kanye nokuqhuba ukuhlolwa okuqhubekayo kwezinqubo zangaphakathi nokuphathwa kwezinhlekelele.
Iyini imali encane edingekayo ukuvula i-akhawunti ye-ECN yokuhweba?
Prime Prime kuvumela amaklayenti ukuthi avule i-akhawunti nge-USD $ 200 noma imali elinganayo.
Prime Prime unikeza amaklayenti izindlela eziningana zokubeka izimali. Lezi yizi: I-Wire Wire, i-POLi, BPAY, Ikhadi lesikweletu / debit, Neteller
Sicela uthumele isicelo sakho sokuhoxisa nge-Client Portal yakho. Zonke ukuhoxiswa okutholiwe ngaphambi kwe-11: I-00 AEDT (00: 00 GMT) izocutshungulwa ngosuku olufanayo lebhizinisi.
Ingabe i-Global Prime i-ECN broker?
Yebo, Prime Prime i-ECN Forex broker.
Yebo, Prime Prime ivumela ngokugcwele ukuhlelwa kokubili nokwenza ama-scalping. Ukusakazeka kanye nezimo zokuhweba yizinketho ezikhethwe ngabathengisi abaningi bosuku nosuku bezingcweti emhlabeni wonke.
Ingabe iNdunankulu Yomhlaba Wonke yamukela amakhasimende ase-US
Prime Prime ayamukeli amaklayenti ase-US. Umthetho we-US CTFC uvimbela amakhasimende ase-US ekuhwebeni nabathengi ngaphandle kwe-US. Prime Prime ihambisana nemigomo yamazwe ngamazwe ne-Australia.
Izimali ze-42 nezinsimbi
I-ASIC ilawula umthengisi wase-Australia
Ama-Beeks FX VPS
I-Exchange Exchange Market
Ama-Beeks wamahhala e-FX VPS
I-Free Forex VPS
I-Global Prime ECN
I-akhawunti ye-Global Prime ECN
Umhlaba jikelele we-Global Prime ECN
I-Global Prime Forex
Ukubuyekezwa kwe-Global Prime Forex
I-Global Prime Pty Ltd
Ubukhulu obuncane bokuhweba
Ama-akhawunti we-Client Trust ahlukanisiwe
Ukuhweba okuphezulu kwe-Tier Forex
ISIKHATHI SOMHLABA WESIKHATHI SONKE - UKUKHULUZA OKUFANELE NOKUSEBENZA KOMPHAKATHI OTHANDAYO Umthengisi othandekayo we-Forex! IZINDABA! Ukubuyekezwa kwe-Prime Prime - I-Best Forex Broker Ngokusekelwa Kwamakhasimende Okuyingqayizivele Ehlelwe ku-2010 futhi ephethwe yi-Gleneagle Securities, uNdunankulu we-Global ungomunye wabathengisi be-Forex ne-CFD e-Australian esekelwe e-Australian ekuhlinzekeni izixazululo zokuhweba kwabadayisi abasebenzayo nabadayisi kanye nabathengisi entsha emakethe ye-Forex noma esebenzisa abacebisi be-FX Expert. Thola ulwazi oluthe xaxa namabhonasi lapha: https://www.bestforexeas.com/global-prime-review/ I-brokerage inikeza abathengi bayo i-Metatrader 4 (MT4) ukuhweba kwezimali ze-42 nezinsimbi ngokusebenzisa abahlinzeki bamakheli be-1 emithathu. Umbono we-Global Prime... Funda kabanzi "